Xildhibaanada laga soo doortay Hirshabeellee ee BFS, sidee u wajahayaan qalalaasaha ka taagan G/Hiiraan – Kalfadhi
Waxaa sii kordhaya walaaca iyo qeyla dhaanta ay qabaan Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay degaanada Maamulka Hirshabeelle kadib markii ay cirka isku shareertay xiisadda ka tagaan gobalka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
Kulamo gaar gaar ah oo ay yeesheen xubnahaan katirsan Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka ayaa waxay doorka ku saareen dhibaatada ka jirta Hiiraan iyo waxyaabihii dhaliyay iyadoo shalayna ay magacaabeen guddi ka shaqeeya xalinta arimaha taagan.
Guddiga ka socda Baarlamaanka Soomaaliya ee ku wajahan Hiiraan ayaa dhowaan lagu wadaa in ay ka baxaan magaalada Muqdisho waxayna habeenno ku soo qaadan doonaan magaalada Beladweyne oo ay dhibaatada ka jirto.
Inta ay halkaasi joogaan waxay la kulmi doonaan odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, Haweenka iyo siyaasiinta degaanka kuwaas oo ka tala bixin doona sidii ay Hiiraan uga bixi laheyd mushkiladaha ragaadiyay.
Senator Dr Cusmaan Dufle oo katirsan Xubnaha Aqalka Sare ee laga soo doortay Gobalka Hiiraan ayaa sheegay inuu walaac xoog leh ka qabo arimaha ka soo cusboonaaday magaalada Beladweyne ee xarunta Gobalka Hiiraan waxa uuna ku taliyay in xaaladda la dejiyo.
“Waxaan aad uga xumahay geeridii Korneel Macow waxaana socda baaritaano arintaas la xariira” ayuu yiri Senator Dr Cusmaan Dufle. “dhamaan dhinacyada u dhaxeeyo kala aragti duwanaanshiyaha waxaan ugu baaqayaa in ay xaaladda dejiyaan oo laga wada hadlo maslaxadda gobalka” ayuu hadlkiisa sii raaciyay Dr Cusmaan Dufle si kooban ula hadlay Kalfadhi.
Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo kamid ah Xubnaha Guddigaas iyo Xildhibaanada laga soo doortay Hirshabeelle ayaa Kalfadhi u sheegay in laba arinba ay xalin doonaan si loo helo xasilooni siyaasadeed iyo mid amni.
“Waxaan xalin doonaan dhibka hadda taagan ee dilka Sarkaalka Booliiska ah iyo wixii sababay muranka u dhaxeeya Yuusuf Dabageed iyo Madaxweyne Waare” ayuu yiri Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdirisaaq Maxamed Axmed “Jindi” oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ay degaan doorashiisa tahay gobalka Hiiraan ayaa sheegay in dhibaatada Gobalka Hiiraan aysan aheyn oo kaliya midda hadda taagan balse ay jirto dhibaatooyin kale oo gobalkaan ka taagnaa bilooyinkii la soo dhaafay.
“Hiiraan dhibaatada ka taagan waa mid ku raagtay sidey u socotay ayey halkaan soo gaartay marka aniga waxaan qabaa in dedaalada socda ay guul u horseedi doonaan shacabka Hirshabeelle, gaar ahaan reer Hiiraan” ayuu yiri Cabdirisaaq Jindi oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ka maqan dalka.
Xubnahaan ayaa qaba in laga fariisto guud ahaan dhibaatooyinka ka jira gobalka Hiiraan islamarkaana laga bilaabo midda hadda taagan iyo waxa dhaliyay isbadalada joogtada ah ee hogaanka gobalka Hiiraan iyo dhibaatada kale ee ka taagan dhanka lacagta shilinka Soomaaliga ah.